Ariana bụ a 5 ukwu ofu 25 payline slot game from Microgaming. Ọ nwere ike ịbụ Microgaming si ọhụrụ foray n'ime mmiri n'okpuru osimiri themed oghere egwuregwu. Inye a soothing na calming mmetụta; -acha anụnụ anụnụ isiokwu nke egwuregwu ga-unu-egwu ruo ogologo oge.
The miri-acha anụnụ anụnụ oké osimiri bụ nke zuru okè ndabere maka ihe ahụ magburu Ariana igwu mmiri gburugburu. Siruru ya na-adịghị ike ìhè anyanwụ; àkù chests, aquatic ahịhịa na a anya nke oké osimiri bed bụ elu na-akwụ ụgwọ ihe nnọchianya nke a oghere egwuregwu. The card nnọchianya nke 10, J, Q, K na A yiri a bit iberibe mgbe hụrụ na-esi anwụde.
Ịmụba akara Njirimara ga na-ndị na winnings abịa na oké na ngwa ngwa. Ọ bụ ihe na-akpali mma, agaghi asu ihe zuru akara stacked ke akpa ukwu ga na-agbasa niile kenha elu akara nke ọzọ na-esi anwụde. Nke a mere na mgbe kenha akara bụ akụkụ nke na-emeri payline.
Wilds: The ederede nakweere ozizi Arius bụ anụ na akara. Ọ ga-ịnọchi anya ọzọ na akara ma e wezụga n'ihi na ikposa akara. The ọhịa akara na-stacked ke akpa ukwu n'oge free spins.
Scatters: The staafishi akara bụ ikposa na ga-akwụ ikposa Enwee Mmeri. Igosi bụla na-esi anwụde; i nwere ike ịkpalite ndị free spins Njirimara mgbe ọ bụla 3 ma ọ bụ karịa nke ndị a na akara na-hụrụ.
Ị ga-emeri 15 free spins nke ike-re-triggered mgbe ọ bụla ndị staafishi akara na-hụrụ n'oge free spins.
The ịgbasa akara mma a na-hụrụ ọbụna n'oge free spins Njirimara. ebe a na-, zuru akara stacked ke akpa ukwu, ga na-agbasa niile kenha elu akara na Wild akara, nke ọzọ na-esi anwụde.
The Ariana ihe ọzọ mmiri n'okpuru osimiri themed oghere egwuregwu. The ofu payline ike-atụle a mwepu maka penny ohere mpere player. n'ozuzu, ọ bụ a dị mfe egwuregwu na ahụkebe emeri Ohere.